Turkiga oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah ciidamada ay Somalia u tababarto | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Turkiga oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah ciidamada ay Somalia u...
Turkiga oo loo gudbinayo dacwad ka dhan ah ciidamada ay Somalia u tababarto
Beledweyne (Dalkaan.com) – Madaxweynihii 2-aad ee maamul Goboleedka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in Dowladda Turkiga ay u gudbinayaan Dacwad ka dhan ah Ciidamada ay u tababarto Soomaaliya oo ka qaybgalay dagaallo ka duwan ujeedka ay u tababartay Ciidankaas.
Waare ayaa sheegay in Ciidamada Gorgor & Haramcad ay ku lug leeyihiin dagaallo “Dano gaar ah uu ka leeyahay Farmaajo”, sidaas awgeed la joogo waqtigii Dowladda Turkiga ay dib u qiimeyn ku sameyn lahayd raad-raaca waxa ay sameeyeen Ciidamadaan.
“Dowladda Turkiga oo ciidanka Baladweyne la geeyay tababartay dacwad rasmi ah ayaan u gudbineynaa, waxa aan ka dalbaneynaa in ay dib u qiimeyn ku sameyso siyaasadda amni ee Soomaaliya, ma waxa aad ciidan noogu tababartaan Ciidan aan ogeyn Wasaaradda Gaashaandhigga & Ra’iisul Wasaaraha meesha la geynayo” ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare.
Madaxweynihii hore ee Hir-Shabeelle ayaa dalbaday in laga hortago tacadiyo ka dhalan kara Ciidamada gaarka u tababaran ee Villa Somalia geysay Magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan oo buuq badan ka dhashay.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble & Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa uu ka dalbaday in ay u istaagaan kahortagga isku dhac ka dhasha saameynta aan wanaaganeen ee ka dhalatay ciidamada Farmaajo geeyay Baladweyne.
”MACALIN MAXAMUD & SHAAKIR WAA FIDNA WADAYAAL HALA ISKA QABTO”
Farmaajo iyo Rooble oo ku dhow iney heshiiyan. Maxaa kasoo baxay...
Man Utd oo ku dhawaaqday inuu ka tagayo Jesse Lingard oo...
Florentino Perez oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay, in...
Arsenal oo Tixgalineysa Heshiis isku badalasho oo ku aadan Aaron Ramsey,...
Imaaraadka oo ka jawaabay dalabkii Rooble + Sawirro
Abaalka Farmaajo oo lagu tijaabinaayo kursiga Cabdiweli Ibraahim Muudeey kaas oo...
Guddiga loo xil-saaray qiimeynta Garbahaarey oo war soo saaray (Daawo)